Pompeo: “Iiraan Waa Saldhigga Cusub ee Al-Qaacida” - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
Pompeo: “Iiraan Waa Saldhigga Cusub ee Al-Qaacida”
January 13, 2021 at 06:55 Pompeo: “Iiraan Waa Saldhigga Cusub ee Al-Qaacida”2021-01-13T06:55:31+02:00 WARARKA SOOMAALIYA
WASHINGTON(HALBEEG)-Xoghayaha Arrimaha Dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa dowladda Iiraan ku eedeeyay in ay Al-Qaacida u oggolaatay in saldhig cusub ay ka sameysato halkaas.
Waxa uu sheegay in si ka duwan markii ay kooxdaas ku dhuumaalaysanaysa buuraha Afghanistan ay haatan gabbaad uga heleen dalka Iiraan.
Wasiika Arrimaha Dibadda Mohammad Javad Zarif ayaa hadalka Pompeo ku tilmaamay been colaad hurinays
Bishii November ee la soo dhaafay, Iiraan ayaa beenisay war ku saabsanaa in taliyihii labaad ee al-Qaacida Abdullah Ahmed Abdullah, oo loo yaqaanno Abu Muhammad al-Masri, ay ciidamo Israa’iil ah ku toogteen Tehran, kaddib codsi uga yimid Mareykanka.
Pompeo oo shir jaraa’id qabtay ayaa sheegay in markii ugu horreysay uu xaqiijinayo in Masri uu geeriyooday 7-dii August, inkastoo uusan faahfaahin dheeraad ah bixin.
Wuxuu sheegay in dadku ay ku khaldan yihiin inay rumeystaan inay cadow isku yihiin quwadda Shiicada Muslimiinta (Iiraan) iyo kooxda xagjirka Sunniga ah ee Shiicada u aragta inaysan diinta si wanaagsan u heysan.
“Joogitaankii Masri ee gudaha Iiraan waxay tilmaameysaa sababta aan halkan u joogno. Al-Qaacida waxay leedahay saldhig cusub waana Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan.” Ayuu yiri pompeo
Tan iyo sanadkii 2015, Mr Pompeo ayaa sheegayay, in Tehran ay xubno ka tirsan al-Qaacida oo dalkeeda ku sugan u oggolaatay inay si xor ah ula xiriiraan xubnaha kale ayna fuliyaan howlo badan oo markii hore laga soo hagi jiray Afghanistan iyo Pakistan, oo ay ku jiraan amarka weerarrada, iyo lacag uruurinta.
Pompeo ayaa sheegay in Mareykanku uu doonayo in liiska argagixisada gaarka ah uu ku daro labo hoggaamiye oo al-Qaacida ka tirsan oo uu rumeysan yahay inay joogaan Iiraan: Mohammed Abbatay, oo sidoo kale loo yaqaanno Abdul Rahman al-Maghrebi, iyo Sultan Youssef Hassan al-Arif.
Dadka arrimahan falanqeeya ayaa su’aal geliyay waqtiga uu hadalka Pompeo ku soo aaday, iyagoo sheegay inuu u muuqday inuu isku dayayo in madaxweynaha la doortay Joe Biden uu uga digayo inuu dib ula macaamilo Iiraan uuna Mareykanka dib ugu biiro heshiiskii nukliyeerka Iiraan ee 2015.
« Dowladda Itoobiya oo u digtay Sudaan
Ilhaan Cumar: “Trump wuxuu halis ku yahay dadka iyo dalka Mareykanka” »